Basal सेल कार्सिनोमा - उपचार, कारणहरू, लक्षण
Basal सेल कार्सिनोमा - एक घातक छाला ट्यूमर को epidermis कक्षहरू देखि विकास हुन्छ भनी। यो ट्यूमर पनि भनिन्छ Basal सेल कार्सिनोमा, यसको नाम राम्ररी छाला को Basal कक्षहरू resembling कमाए। हुनत यो शरीर भर यसको कक्षहरू फैलाउने, अन्य Tissues र अंगहरु मा बढ्न सक्नुहुन्छ, तर metastasize गर्न सक्नुहुन्छ - यो ट्यूमर मा, त्यहाँ अन्य malignancies अलग्गै यो सेट एक सुविधा छ।
यो ट्यूमर मान्छे जसको उमेर 40 वर्षभन्दा छ मा ज्यादातर देखिन्छ। यसको घटना योगदान गर्ने कारक को एक को लागि, गर्न overexposure भन्छिन् पराबैंगनी रेज जसको अर्थ दक्षिणी र जसको काम सूर्य गर्न लामो समयसम्म जोखिम संग जोडिएको छ मान्छे को बासिन्दा, यो थप अरू कसैलाई भन्दा रोग विषय हो कि सूर्य, को। साथै, हल्का छाला रंग संग मान्छे सूर्य को पराबैंगनी रेज kantseroobrazuyuschimi चपेटामा छन्।
रोग को विकास गर्न योगदान अर्को कारक, carcinogens र यस्तो आर्सेनिक वा तेल रूपमा विषाक्त पदार्थ हो। यसबाहेक, कुनै पनि शरीर साइट र प्रतिरक्षा immunosuppressants को दमन traumatizing निरंतर पनि यस्तो Basal सेल कार्सिनोमा रूपमा रोग उत्पन्न हुन सक्छ, जो को उपचार समय र प्रयास को धेरै चाहिन्छ।
यो रोग को उद्भव बच्चा असम्भाव्य छ, तर त्यहाँ भनिएको छ, जो Turtledove-Goltz सिंड्रोम वा neobazotsellyulyarny सिंड्रोम रोग, एक जन्मजात रुप हो। यो सिंड्रोम bazaliomnymi समान छाला घाउ, करङहरु को malformations र तल्लो चिबुक cysts जोडती।
यो ट्यूमर, नैदानिक प्रकारका एक ठूलो संख्या मा:
Nodular (वा krupnouzelkovaya)
Tsilindroma (Mordechai Spiegler ट्यूमर)
अक्सर, यो ट्यूमर अनुहार वा घाँटी मा देखिन्छ। सुरुमा, छाला एक सानो एउटा सामान्य डण्डीफोर जस्तै यसको आकार, फिक्का गुलाबी रंग को बन्डल देखिन्छ। यो "डण्डीफोर" बिस्तारै र निरन्तर बढ्दै छ, गाँठ कि आशङ्का हुन सक्छ जो केही - भविष्यमा malignancy। एउटा सानो nodule को बीचमा केही समय पछि यो भन्दा दस्तक यदि चाँडै फेरि बढ्छ कि grayish पाप्रो देखिन्छ। ट्यूमर वरिपरि बढ्नेछ जब यो दानेदार formations मिलेर एउटा सानो तर बाक्लो तकिया हुनेछ।
थप वृद्धि, प्रत्येक अन्य र "माकुरा नसाहरु" को उपस्थिति गर्न टाँसिएको को अपरिहार्य छाला ulceration र पीडा धेरै nodules गर्न सक्छ। ट्यूमर विभिन्न प्रकारका विभिन्न तरिकामा नै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
Basal सेल कार्सिनोमा उपचार
Basal सेल कार्सिनोमा, उपचार जो को रोग पाठ्यक्रम प्रारम्भिक सुरु गर्न राम्रो छ, त्यो पारित गर्न सक्षम हुने छैन, र कारण पाठ्यक्रम मात्र थप र थप बढ्नेछ। ट्यूमर को उपचार विभिन्न तरिकामा उत्पन्न गर्न सक्छन्, जो को विकल्प यसको आकार, आकृति र morphological फारम मा निर्भर गर्दछ।
सर्जिकल हटाउने जस्तै रोगहरु लड्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो छाला Basal सेल कार्सिनोमा। यस मामला मा उपचार ट्यूमर र वरपरको ऊतक excising द्वारा बाहिर।
वैकल्पिक शल्य विधि - लेजर पृथक्करण। यो विधि पारंपरिक सर्जरी जटिलताहरू धेरै हुन सक्छ जसलाई मा वृद्ध लागि विशेष उपयुक्त छ।
Cryodestruction - ट्यूमर नष्ट गर्न तरल नाइट्रोजन संग, उपचार को एक एकदम छिटो र पीडारहित विधि। यो कम उपचार को यो विधि संग पुनरावृत्ति को एक जोखिम छ भन्ने छ।
लोक उपचार को उपचार - साथै, त्यहाँ यस्ता रोगहरु Basal सेल कार्सिनोमा रूपमा सामना अर्को तरिका हो। ट्यूमर घातक छ र, एक गम्भीर जीवन खतरामा जटिलताहरू दिन सक्छ पूर्ण यो रोग लागि सबै लोकप्रिय उपचार नत्याग्ने पक्का हुन कि दिइएको।
Soporous राज्य: वर्णन, कारण, अवधि
उपचार भन्दा Unwelcome अतिथि pinworms
Hypothyroidism। विकृति लागि यो के हो
के घाँटी मा सूक्खापना र किन यो देखिन्छ लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय हुनेछ।
Meteozavisimost: लक्षण, उपचार, कारण
हितोपदेश: तीतो सत्य मीठो झूट भन्दा राम्रो छ। तीतो सत्य वा मीठो झूट: जो राम्रो छ?
गर्भावस्थाको बेला एचसीजीको विश्लेषण। यो के हो, र यसको मतलब के हो
उद्यमी मा पीपीएम को परिचय: परिणाम को कदम। 1 C को कार्यान्वयन त्रुटिहरू: UPP
एक टमाटर गहना वा अर्को फूल कसरी बनाउने। अनुभवी शेफ देखि केही सुझावहरू
इटालियन नृत्य इतिहास र आफ्नो किसिमहरु
"ओम्रोन" (pedometer) - राम्रो स्वास्थ्यको लागि बाटो
Posthumous पितृत्व। विवरण पितृत्व को स्थापना मा
सुरक्षित इन्टरनेट दिन - धेरै देशहरूमा एउटा सरकारी छुट्टी
कच्चा फलाम पैन खियाले: सम्भावित कारणहरू र सिफारिसहरू के
पैसा र यसको नियम ऊर्जा। कसरी आफ्नो जीवन मा पैसा को ऊर्जा आकर्षित गर्न? पैसा को ऊर्जा कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
करियर परिवर्तन: के, कहाँ, कसरी?